I-Dickens Lodge e-12 Mile Farm - I-Airbnb
I-Dickens Lodge e-12 Mile Farm
Fredericktown, Missouri, i-United States
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Monica
Igumbi lokulala elinokuthula, elihle, eli-3, ikhabethe lokugezela eli-2 elibekwe kumahektha angama-75 ehlathini elinombono omangalisayo wezilwane zasendle emasimini. Izinsiza: Iwasha, isomisi, okokuhlanza, ikhishi elinesitoko esigcwele w/ikhofi, itiye, izinongo, ibhotela nama-condiments kufaka phakathi zonke izinto ezinkulu nezincane. Igumbi elikhulu elikhulu w/48" isikrini esiyisicaba, izigxobo zokudoba, amathoyizi, imidlalo, izicathulo ze-creek namabhuzu. Abalandeli besilingi kuvulandi wezihlalo ezingaphambili 8 Ibhishi langasese ku-12 Mile Creek. Ukudoba, izindlela zamabhayisikili asezintabeni, umlilo wekamu, ichibi elihle ngemuva kwendlu.
I-Dickens's Lodge ku-12 Mile Farm izungezwe imvelo namahektare angama-75 ukuze ujabulele ukudoba, ukugibela izintaba nokujabulela umfudlana. I-Lodge iyindawo yokuhlala efudumele, enkulu enobungani bomndeni. Sinezinsiza eziningi ukuhlangabezana nezidingo zakho ngezingubo zokulala ezengeziwe, izikhwama zokulala, ombhede, izicathulo zokubhukuda namabhuzu okugibela izintaba anosayizi abahlukahlukene. Izingubo ezengeziwe ziyatholakala emakamelweni elondolo kanye nekhabethe lokulala. Ekamelweni elikhulu lokulala, kukhona inkosi emangalisayo kanye nombhede wosuku olulodwa. E-master bath, umnyango wekhabethe ukhiyiwe. Kukhona izinto eziningi zomuntu siqu endlini yokugezela eziyize & cela ukuthi usebenzise kuphela izinto ezishaweni nangaphansi kukasinki. Kukhona iphepha langasese elengeziwe, amathawula, amathawula ezandla, izingubo zokuwasha, izingubo ezengeziwe, amalineni, izicathulo zamanzi, izicathulo zokuhamba, amathoyizi, i-vacuum, iwasha, isomisi, okokuhlanza izingubo, namashidi okomisa. Ekhishini, unokufinyelela okugcwele kunoma yini esesiqandisini, izinongo, izinto zokubhaka, izitsha, ikhofi, itiye, izinto zokuhlanza, isethi yosizo lokuqala, nezinto zikagesi (ngisho unomshini wokukhipha amanzi emzimbeni, izinto zokwenza i-sushi, ikhithi yamathuluzi, amabhamuza. , isidlali serekhodi, izikhulumi). Kuvulandi ongemuva, kunomgodi we-BBQ onomuntu obhemayo, ( uzodinga ukuthenga ama-briquette noketshezi olulula). Ekamelweni elikhulu, kunama-DVD, amathoyizi nezincwadi kukhabethe le-TV, kanye namabonakude & nesibonakude, amajazi engeziwe, amabhantshi namabhuzu epulazi. Ekamelweni lokuhlanza kukhona izihlalo zekamu emgodini womlilo futhi ulethe ibhayisikili lakho lezintaba ukuze uthole izindlela ezijabulisayo! Kuwo wonke umuntu, kunomugqa wezingubo ezimbili oweluliwe ofakiwe ukuze ugcine izingubo zakho zisesimweni esihlanzekile.
I-Dickens's Lodge ingamakhilomitha angu-1.5 ukusuka ku-Highway 67 ku-Madison 411. Kunomakhelwane abathathu ku-Madison 411 ngaphambi kwebhuloho ngasesontweni. Njengoba ubekwe kule ndawo yasemaphandleni, uyakwazi ukujabulela ukuhlala wedwa nezinkomo nezilwane zasendle. Ungase uzwe umakhelwane wethu, uMorris, ukuthi woza uhlole izinkomo - uzoshayela enkundleni. Qinisekisa ukuthi uma udlula ensimini uyawavala wonke amasango owavulayo - uma kungenjalo, izinkomo zizogijima mahhala!
Ngokuhlala kwakho, uyakwazi ukungithinta ngomakhalekhukhwini noma ngocingo. Kukhona umbhoshongo we-ATT oseduze kakhulu, kodwa awukho umugqa womhlaba. Kukhona i-iPhone ye-Dickens Lodge yesevisi yeselula, indawo eshisayo kanye nokuxhumana ne-Netflix ne-Hulu. Kukhona i-wifi futhi ikhodi izothunyelwa kuwena usuku olulodwa ngaphambi kohambo. Kuzophinde kube nencwadi yezivakashi yolwazi, imephu yendawo kanye nokubuyekezwa kwezinto okumele zenziwe e-Fredericktown.
Ngokuhlala kwakho, uyakwazi ukungithinta ngomakhalekhukhwini noma ngocingo. Kukhona umbhoshongo we-ATT oseduze kakhulu, kodwa awukho umugqa womhlaba. Kukhona i-iPhone ye-Dickens Lo…